Ulawulo lwesinyanzelo kunye neempawu zalo zomthetho | Ezezimali
Yintoni umnqweno? Ibhekisa ku inkqubo yokunyanzelisa okanye iindlela zokunyanzelisa xa kukho uthotho lweenkqubo ezilandelwayo nezigweba intlawulo yemali.
Nokuba yirhafu, iimpahla okanye iinkonzo, oku kwenzeka xa ifayile ye- onetyala akakhange enze ntlawulo ngexesha elifanelekileyo njengoko kuchaziwe kumacala mabini. Kuxa intlawulo ingahlawulwanga ngokuzithandela ngulowo unetyala apho isinyanzelo sisetyenziswa njengenkqubo apho ityala elinempahla yexabiso yomntu onetyala liqokelelwa kwaye lihlawulwe.
1 Ithini inkqubo yokunyanzeliswa?
2 Amaxesha ekunikezeleni ngokungxamisekileyo
3 Iimpawu zokubonelelwa ngokungxamisekileyo
4 Iziphumo zokubonelelwa ngokungxamisekileyo
5 Zithini izizathu zokuchaswa komyalelo wokunyanzeliswa?
6 Malunga nokuhluthwa kweeasethi kunye namalungelo
Ithini inkqubo yokunyanzeliswa?
Ngokwesiqhelo i Umrhafi kufuneka ahlawule amatyala okanye irhafu ngexesha elifanelekileyo, ngolu hlobo lubekiweyo.
Oku kuthetha ukuba onetyala uya kuwahlawula amatyala akhe ngexesha lokuhlawula ngokuzithandela njengoko kuphawuliwe ngu ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo irhafu.
Xa kungekho ntlawulo ngexesha lokuhlawulwa ngokuzithandela, ukutsalwa kwemali kunye nokukhula kwe a inzala yokunqongophala kwe pago kwaye ekugqibeleni kuyeza ngokungxamisekileyo.
Yaziwa njenge Inkqubo yokuqokelela okanye inkqubo kabani ukubulawa kunyanzeliswa. Ngenkxaso yetayitile yesigqeba esikhutshwe leli qumrhu loluntu kwaye ke ngoko uqhubeke nokwenza ukuba ityala lawo lomthetho woluntu lenziwe ngolawulo lomntu ngamnye weasethi yomntu onetyala okanye onetyala.
Lo mthetho ugunyazisa ulawulo ukuqhubeka ngokuchasene neasethi yomntu onetyala ekubhekiswa kuye.
Kukho i Iipesenti ezingama-20 zerhafu eyongeziweyo kwityala, Ukongeza koku, imeko yongxamiseko iya kuvelisa "inzala emiselweyo".
Ngenxa yolibaziseko ekuqokelelenine kwiintlawulo ze Hlawula ityala. Kwimeko apho ityala liphelisiwe ngaphambi konxibelelwano lomyalelo wokunyanzeliswa, i Iipesenti ezingama-20 zerhafu eyongeziweyo ematyaleni yehlile yaya kwi-10%Ngaphandle kokuvelisa inzala yokuhlawula kade.
Amaxesha ekunikezeleni ngokungxamisekileyo
Inkqubo yokunyanzeliswa iqala xa isaziso kumhlawuli werhafu senziwe saziswa. Kukwimeko yonyanzeliso apho kuchongwe eli tyala lilindileyo.
Ngaphakathi Iintlawulo zexesha lokulawula zigqityiwe kwaye lowo unyanzelekileyo uyacelwa ukuba enze intlawulo ekubhekiswa kuyo.
El ixesha lokulawula liyaqala usuku emva komhla wokugqibela wexesha lokuhlawula ngokuzithandela.
Xa ixesha lokulawula liqala, ulawulo lungaqala ngenkqubo yokunyanzeliswaNangona kunjalo, ngaphambi kokuqala kufuneka yazisa umthetho wezolawulo aziwa njenge "umyalelo wonyanzeliso".
Iyafana inokuthathwa njengesihloko esaneleyo sokuqala inkqubo. Umyalelo wokunyanzeliswa unobunzima obufanayo kunye namandla olawulo njengoisigwebo sokugweba"Kungoko ke oku kunokwenzeka ukuba uqhubeke ngokuchasene patrimosis yomrhafi ochaphazelekayo.
Iimpawu zokubonelelwa ngokungxamisekileyo
Ngokwe-LGT, iimpawu zenkqubo yokunyanzeliswa Zizo zilandelayo:
Inkqubo yokunyanzeliswa ilawulwa ngokukodwa. Inxalenye kuphela yolawulo lwerhafu ngumsebenzi wokusombulula izehlo ngaphakathi kwenkqubo yokunyanzeliswa, kunye nokuqonda imeko ethile.
Ngokumalunga nokuvumelana kwakho malunga noku nezinye iinkqubo zokunyanzelisa. Inkqubo yokunyanzeliswa ayinakho ukudityaniswa neenkqubo zenkundla okanye nayiphi na enye inkqubo ebandakanya intshutshiso.
Ngaphakathi kokunxibelelana ne iinkqubo ezizodwa zokwenza. Kwezi meko, olona hlaselo ludala luya kuba lolokukhetha okukhethiweyo, ngaphakathi kwale meko, ukubaluleka kwetyala kuya kuthathwa ngomhla wokukhuthala kokubanjwa.
Kwimvumelwano iinkqubo zokunyanzeliswa jikelele okanye ukungabinamali. Ewe, kwaye kuphela ukuba umyalelo wokunyanzeliswa wakhutshwa nomhla ngaphambi kokubhengezwa kokungakwazi ukuhlawula amatyala.
Inkqubo yokunyanzeliswa ine ukuqalisa kunye nokuxhonywa kweofisi kuzo zonke kwaye naziphi na iinkqubo zayo.
La ukumiswa kwenkqubo yokunyanzeliswa inokwenziwa kuphela phantsi kokucinga okubonelelweyo kummiselo werhafu.
Kuwo nawuphi na amatyala anikezelweyo kwimimiselo yerhafu.
Kwimeko apho umntu obophelelekileyo ehlawula lonke ityala lakhe.
Kwimeko apho kukho umonakalo okhoyo kulowo unyanzelekileyo, okanye impazamo ngaphakathi kokumiselwa kwetyala.
Ngenxa yamaqela eqela lesithathu. Oku kuyenzeka xa umntu wesithathu efuna ukushenxiswa kwesithintelo kuba kuyaqondakala ukuba yeyakhe kummandla okanye ukuba, ngokukhetha uNondyebo kaRhulumente, umntu wesithathu ekubhekiswa kuye unelungelo lokubuyiselwa ityala lakhe.
Iziphumo zokubonelelwa ngokungxamisekileyo
Nje ukuba inkqubo yokunyanzelisa iqale, Iziphumo ezibonisiweyo zezi:
Ulawulo lwerhafu ekuthethwa ngalo lunakho kwaye lusenokusebenzisa amagunya olawulo akhoyo ngexesha lenkqubo yokunyanzeliswa. Oku kwenzelwa ukuqokelela ityala elingekahlawulwa, elenziweyo ngokuhlutha nokunyanzeliswa kweziqinisekiso. Ngokwesiqhelo olu hlobo lwezenzo zesigqeba alunakwenziwa kwangoko emva kokwazisa lowo ubophelelekileyo, kufanele kudlule ixesha elinokubhekiswa kuwo nakowuphi na ummiselo.
Malunga nexesha lokungena. Emva kwesaziso se "Uncedo olungxamisekileyo", Uya kuba nethuba lokuhlawula okanye ukuhlawula ityala. Njengoko kunokulindelwa umrhafi angayenza ingeniso ngalo naliphi na ixesha ngethuba lesigqeba solawulo, okoko nje oku kusenzeka phambi kwesaziso somyalelo wokunyanzeliswa. Nangona intlawulo ingenziwa, kukwakho umahluko ekwenzeni intlawulo ngamaxesha ahlukeneyo, lo mahluko uhlala kwiimali ezongeziweyo zexesha lolawulo kunye nenzala yokulibaziseka, ekufuneka lowo ubophelelekileyo ahlawule ngokupheleleyo.
Zithini izizathu zokuchaswa komyalelo wokunyanzeliswa?
Kucacisiwe ukuba akukho sizathu senkcaso ngaphandle kwezi zilandelayo zidwelisiweyo kwaye ke, ayizukuthathwa njenge Isizathu sokuchaswa kongxamiseko nasiphi na esinye isizathu ngaphandle kwezi zilandelayo:
Ityala liyacinywa, licinywe liphela okanye kukho ummiselo welungelo lokufuna intlawulo efanayo.
Ukuchaswa komyalelo wokunyanzeliswa kuya kwenzeka kwimeko apho kukho isicelo sokumiswa, sokuhlawulwa okanye sokuqhekezwa phakathi kwexesha lokuhlawula ngokuzithandela okanye ezinye izizathu zokunqunyanyiswa ukuba kwenzeke.
Ukuchaswa komyalelo wokunyanzeliswa kuya kwenzeka kwimeko apho kungabikho saziso malunga nokuhlawulwa kwetyala.
Ukuchaswa komyalelo wokunyanzeliswa kuya kwenzeka kwimeko apho ukucinywa kwempahla kuye kwarhoxiswa.
Ukuchaswa komyalelo wokunyanzeliswa kuya kwenzeka kwimeko yokushiyeka okanye impazamo kumxholo oquka umyalelo wokunyanzeliswa, impazamo efanayo okanye ukushiyeka okuthintela ukuchonga umntu onetyala okanye kwiiparameter zokuqonda ityala.
Malunga nokuhluthwa kweeasethi kunye namalungelo
Ukuthathwa kufuneka kugubungele kuphela icandelo elilinganayo nexabiso leeasethi kunye namalungelo agubungela ixabiso letyala elingakhange lihlawulwe, inzala yokuhlawulwa kade kwento efanayo, iintlawulo ezongeziweyo zexesha lolawulo kunye nazo naziphi na iindleko zenkqubo yokunyanzeliswa.
Ngokuzenzekelayo Iiasethi okanye amalungelo anexabiso elingaphezulu kwexabiso lezi zixa zichazwe ngasentla akufuneki zithathwe.
Ngaphakathi kokuthimba. Kule ndlela, kumiselwe iindlela ezithile ezimisela i-odolo elandelwayo ngexesha le-embargo:
Isivumelwano nomrhafi kwimbambano. Logama umhlawuli werhafu ayicela, indlela yenkqubo yokuthimba inokutshintshwa, ngaphandle kokuyeka bucala ukuba iiasethi ezithinjiweyo ziqinisekise ixabiso kunye nokuqokelelwa, ngokusebenza ngokukuko nangokukhawuleza, oku ngaphandle konzakalisa umntu wesithathu.
Ukuba akukho sivumelwano, iiasethi ziya kuthathwa.Ngesi sizathu, ezo zinto kulula ukuzithengisa kwaye zingabizi mali kangako kwiqela lomntu unyanzelekileyo ziya kuthathelwa ingqalelo.
Ngexesha lokuthintela, kuya kulandelwa lo myalelo ulandelayo:
Imali eziinkozo okanye imali eyinkunzi efakwe kumaziko emboleko, ukuba ngaba yeyomntu onetyala.
Amalungelo kunye nokukhuseleka okunokufezekiswa kwixesha elifutshane, ukuba ingaphantsi kweenyanga ezi-6.
Umvuzo walowo unetyala, imivuzo kunye neepenshoni.
Ukuthengiswa kwezindlu kunye nomtyali.
Inzala, umvuzo kunye neziqhamo zomntu onetyala.
Iindawo zorhwebo nezorhwebo zomntu onetyala.
Izinto zakudala zalowo unetyala, iintsimbi ezixabisekileyo, iingcibi zegolide, amatye amahle kunye nezacholo.
Iipropathi ezishukumayo kunye nezobuqu zomntu onetyala.
Amalungelo kunye nokukhuseleka okunokufezekiswa kwixesha elide, eli xesha lingaphezulu kweenyanga ezintandathu.
Izinto ezaziwayo kunye namalungelo ziya kuthathwa ngokomyalelo okhankanywe apha ngasentla., nangona kunjalo, zikhona ngaphandle ezimbini okanye imigaqo ekhethekileyo ekhankanywe ngezantsi:
Okokugqibela, ezo asethi zifuna uphazamiseko oluyimfuneko kwindawo yokuhlala yomrhafi, isenokuba yifenitshala, ubucwebe, njl. Logama ezi zinto zingaphakathi ekhaya.
Iindidi zeeasethi "ezingafikelelekiyo" ngumthetho azizukubanjwa. Umzekelo woku yingxowa-mali yomhlala-phantsi okanye isixhobo ekurhweba ngaso, ukongeza kuthathelwa ingqalelo inxalenye engenakufikeleleka yomvuzo okanye yomvuzo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Ubonelelo olungxamisekileyo
Inzala ngaphandle kwemali enomdla kumakhadi etyala